यस्ता घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्, जसको प्रयोगले गर्भ रहन दिँदैन् ! – Medianp
यस्ता घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्, जसको प्रयोगले गर्भ रहन दिँदैन् !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, असोज २२, २०७५१६:३०0
एजेन्सी,२२ असोज । मानवलाई मात्र नभएर हरेक प्राणीले यौन सम्बन्ध राख्ने गर्छन् । हरेक प्राणीले यौन सम्बन्ध राख्नुको छुट्टै महत्व हुने गर्छ । यतिबेला विश्वमा जनसख्या बढेको कारण जनसंख्या नियन्त्रण गर्नको लागि सन्तान कम जन्माउने चलन रहेको छ । पछिल्लो समय सानो परिवार सुखी परिवार भन्ने नारा विश्वमा नै चर्चामा रहेको छ ।
गर्भनिरोधकका थुप्रै साधनहरु पनि बजारमा आएका छन् । तर अहिले थुप्रै युवायुवतीहरुले असुरक्षित यौन सम्पर्क राखेको कारण गर्भवती हुने सम्भावना बढी रहेको छ । यसरी हुने गर्भधारण रोक्नको लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । त्यस्तै परापूर्वकालमा गर्भनिरोधक साधनको लागि विभिन्न किसिमका घरेलु उपायहरु अपनाउने परम्परा रहेको थियो ।
विमानबाट छतमा खसेको अचम्मको डल्लो , जसले एक युगल जोडीलाइ बनायो अचम्मित
इन्टर्पोल प्रमुख हाम्रो नियन्त्रणमा: चीन